'Zimbabwe Land Reform Riddled With Corruption'
A United States Congressional staff member has attributed Britain’s decision to renege on its Lancaster House commitment to compensate for land, on what he calls Zimbabwe’s corrupt and lop-sided land redistribution exercise.
Almost three decades after Zimbabwe undertook a controversial land reform exercise that saw many white farmers forcibly removed from the farms they occupied, debate has been ranging over why President Robert Mugabe’s government embarked on what has been described as a haphazard and chaotic exercise.
The debate was reignited at a recent town hall hosted by Voice of America’s Zimbabwe Service, titled Zimbabwe @ 36: The way Forward.
Simpkins declared Zimbabwe’s land reform exercise as mired in controversy since the country’s independence from British rule, and beneficial to mostly loyalists of President Mugabe's ruling Zanu PF party.
The United States allegedly pledged to pay $75 million every year in the first 10 years of Zimbabwe’s independence but that was not done.
President Mugabe defied Britain’s call for accountability saying Zimbabwe was not obligated to do so. It was soon after that the ruling Zanu PF party decided to forcibly take over white-owned commercial farms in 2000 claiming that Britain had reneged on paying for Zimbabwe's land reform program.
The president has blamed the sanctions for the country’s current poor state of the economy.
Report on Zimbabwe Land Question Filed By Gibbs Dube